Dowladda oo xirtay ciidankii ku lugta lahaa iska hor-imaadyo ka dhacay magaalada Muqdisho – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Dowladda oo xirtay ciidankii ku lugta lahaa iska hor-imaadyo ka dhacay magaalada Muqdisho
Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa xabsiga u taxaabtay ciidamadii ku lugta lahaa rasaas maalintii shalay lagu dilay sarkaal ka tirsanaa hay’adda nabad-sugidda Qaranka ee NISA oo lagu magacaabi jiray Ciise Xasan Caraale (Jiijiile).
Ciidamada xabsiga loo taxaabay ayaa la sheegayaa inuu haatan ku socdo baaritaano la xiriira sida ay falkaaasi u geysteen, sida uu sheegay taliyaha NISA C/laahi Sanbaloolshe.
Goobtii ay illaalada ka haayeen ciidamada xabsiga la dhigay ayaa la sheegayaa in haatan la geeyay ciidamo cusub.
Dhinaca kale, wasiirka amniga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Abuukar Isloow Ducaale oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in aanay waxba iska bedeli doonin howlgalada ay ciidamada xasilinta amniga ka wadeen magaalada Muqdisho.
Wuxuu wasiirka sheegay in dhammaan ciidamadii ku lugta lahaa dagaaladii shalay ka dhacay qeybaha kala duwan ee magaalada Muqdisho xabsiga loo taxaabay, islamarkaana uu ku socdo baaritaano ku aadan sida ay falka u geysteen.
Maalintii shalay ayaa waxaa magaalada Muqdisho ka dhacay iska hor-imaadyo kala duwan oo u dhaxeeyay ciidamada xasillinta ammaanka Muqdisho iyo kuwa NISA.
Iska hor imaadkii dhex maray ciidamada xasillinta iyo kuwa illaalada madaxtooyada ee fadhigoodu ahaa agagaarka Tiyaatarka Qaranka ayaa waxaa ku dhintay taliye hore oo ka tirsan hay’adda nabad-sugidda Qaranka ee NISA Ciise Xasan Caraale (Jiijiile) iyo seddax askari oo isaga illaalo u aheyd.